News36media, Author at News36media
October 29, 2020 News36mediaLeaveaComment on धर्ती माताले पत्रकारलाइ तरबार देखाएपछि भागाभाग, आश्रममा यस्तोसम्मको शक्ती देखियो
October 27, 2020 News36mediaLeaveaComment on असई गोविन्द बिककि दिदि भाबुक हुदै भनिन् : दिदि त कति भाग्यमानी भाई असई, बुढो सशस्त्र प्रहरी भन्दै यसरी मुर्छा परीन ! (भिडियो सहित)
गोविन्द बिक साह्रै नै मेहेनती थिए उनि साधारण परिवारबाट सँघर्ष गरेर नै यहाँसम्मकाे यात्रा तय गरिरहेका थिए । प्रहरीले गोविन्द र राम बहादुरको ज्या’न लिइएको भन्दै सात जनालाई पक्राउ गरेको छ । गोविन्दले सो क्षेत्रमा हुने गतिबिधी माथी शुरु देखी नै क’डाई गर्दै आएको बुझिएको छ । गोविन्द र रामबहादुरको ज्या’न लिने समूह ९ देखि […]
October 27, 2020 News36mediaLeaveaComment on बाटोमा झोला फेला पार्यो, खोलेर हेर्दा प्रहरी नै चकित!
तपाई के गर्नुहुन्छ जब बाटोमा १२ लाख ३४ हजार रुपैयाँ गड्डी देखा पर्छ । बारामा त्यस्तै भएको छ । उक्त रकम विदेशी विनिमय अपचलन (हुन्डी) कारोबारीले छाडेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । १२ लाख ३४ हजार बढी रुपैयाँ बारा प्रहरीले ब’रामद गरेको हो ।रकम बोक्दै गरेका व्यक्ति भने प्रहरीलाई देखेपछि झोला फ्याकेर फ’रार भएका छन् […]
October 27, 2020 News36mediaLeaveaComment on दु:खद खबर : दशै मनाउन घर आएका नेपाली सेनाका ज’वानको ज्या,न गयो
तेह्रथुम _ तेह्रथुमको आठराई-५ छातेढुङ्गाको होडामा क’रेन्ट लागेर नेपाली सेनाका जवानको मृ’त्यु भएको छ । दशैं मनाउन घर आएका सिराहाको शे’र गणमा कार्यरत २६ बर्षीय राजन बराईलीको क’रेन्ट लागेर बिहिवार बेलुका मृ’त्यु भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय संक्रान्तिबजार प्रहरी निरीक्षक शेषकराम थान्दारले जानकारी दिनुभयो । बिहीबार अपरान्ह ५ बजे ट्रान्समिटरबाट कालो ता’र जो’ड्ने क्रममा बराईलीलाई क’रेन्ट […]
October 27, 2020 News36mediaLeaveaComment on कोरोनालाई जितेर डिस्चार्ज भएका वीर अस्पतालका चिकित्सकको निधन
काठमाडौं। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मुक्त भएका वीर अस्पतालका चिकित्सक (प्यारामेडिक्स) कालु सिंहको मुटुको समस्याका कारण मृ’त्यु भएको छ। अस्पतालको कार्डियोलोजी डिपार्टमेन्टको ओपिडीमा काम गर्ने सिंह दुई साताअघि कोरोना मुक्त भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका थिए। घरमै आराम गरिरहेका सिंह सोमबार राति अचानक पेट दुःख सुरु भएसँगै वीर अस्पतालमै भर्ना भएका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण सिंहको एक […]
October 25, 2020 October 25, 2020 News36mediaLeaveaComment on मेरो श’व आमालाई दिनु’ भन्ने नोट लेखेर ….
जंगलको रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृ’त फेला परेकी युवतीको अझै सम्म पनि पहिचान हुन सकेको छैन । उनका आफन्त पनि कोही सम्पर्कमा आएका छैनन् । मोरङको बेलबारी नगरपालिका १० स्थित सिर्जना सामुदाकिय बनको रुखमा उनी झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेकी हुन् । उनको पहिचान खुल्ने कुनै कुरा छैन । शव नजिकै प्रहरीले ‘मेरो शव आमालाई जिम्मा दिनु’ […]
October 25, 2020 News36mediaLeaveaComment on नेपालीको महान चाड दशैमा क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले दिए सबै नेपालीलाई शुभकामना !
काठमाडौं- क्यानडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन टुडोले विश्वभर रहेको हिन्दु समुदायमा विजयादशमीको शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री टुडोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्यानडालगायत विश्वभर रहेका हिन्दु समुदायलाई दशैंको शुभकामना दिएका हुन् । **** यो समाचार को पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ****
ल हेर्नुस् दशैंका लागि आयो यस्तो खसी!! अफ्रिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आएको यो बोको जस्को मुल्य नै ९ लाख (भिडियो सहित)
October 25, 2020 News36mediaLeaveaComment on ल हेर्नुस् दशैंका लागि आयो यस्तो खसी!! अफ्रिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आएको यो बोको जस्को मुल्य नै ९ लाख (भिडियो सहित)
p>पछिल्लो समयमा किसानहरुमा बोयर जातको बाख्रापालनमा आर्कषण बढेको छ । छिटो हुर्कने र तौल बढी हुने भएकाले व्यावसायिक कृषकले उन्नत बोयर जातको बाख्रा पाल्न थालेका छन ।नेपालमा अफ्रिकाबाट आयात गरीएका बोयर जातका बाख्रा आम्दानीको हिसाबले निकै फलदायी हुने जगतपुर एग्रो चितवनका संचालक योगेन्द्र खड्का बताउछन । बोयर जातका बाख्रा छिटो हुर्कने, तौल बढी, मासु गुणस्तरीय […]
October 24, 2020 News36mediaLeaveaComment on प्रेमीसँग कुरा गर्दागर्दै म्यासेन्जर मै यस्तो छा’डा हर्कत (हेर्नुहोस भिडियो)
आज भोली प्रबिधिले निकै ठुलो फड्को मारेको छ । यो बिशाल पृथ्वीलाई एक हातको ईसारामा हेर्ने र घुम्न सकिन्छ । आफुलाई मन लागेको कुराहरु एक स्वृचको भरमा लिन सकिन्छ । यही विज्ञान प्रबिधिको युगमा बिभिन्न सामाजिक सञ्वजालहरु पनि भित्रिएका छन जस्को कारणले ठुलो संसारका धेरै मान्छेहरु सँग एउटा स्मार्ट फोनको प्रयोगले हामी नजिक हुन देख्न […]
October 23, 2020 News36mediaLeaveaComment on भर्खर विदेश वाट आएका श्रीमानले २४ वर्षकी श्रीमतिको ज्यान लिए
झापा । झापामा एक जना पुरुषले आफ्नै श्रीमतिको ज्या*न लि’एका छन् । भर्खर विदेश वाट आएका श्रीमानले २४ वर्षकी श्रीमति रिता थापाको ज्या*न लिए.का हुन् । विदेश वाट आएका उनी १५ दिन क्वारेन्टिन.मा बसेर घर पुगेका थिए । घ’टना भएको अघिल्लो दिन उनीहरु दिनभरी संगै थिए । उनीहरु खोलामा संगै माछा मा*र्न ग’एका थिए । […]